Beesha Caalamka oo taageeray go’aannadii ka soo baxay Shirkii Dhuusamareeb – HalQaran.com
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – War qoraal oo ka soo baxay Xubnaha Beesha Caalamka ee taageera Soomaaliya ayaa lagu soo dhaweeyay qodobbadii ka soo baxay Shirkii Madaxda DF Soomaliya iyo Dowlad Goboleedyada ee Magaalada Dhuusamareeb.
Beesha Caalamka ayaa waxa ay shaaciyeen, inay lagama maarmaan tahay in geeddi socodka doorashadu uu dalka ka saaro hanaanka soo xulidda, kuna hago waddo lagu gaaro doorashooin toos ah.
Beesha Caalamka ayaa ugu baaqday saamileyda Siyaasadeed ee Soomaaliya inay ku heshiiyaan qorshe lagu hirgeliyo dhinacyada kale ee dib u habaynta dimuqraadiyadeed ee Soomaaliya, oo ay ka mid yihiin Dib u eegidda Dastuurka, yagleelidda dimuqraadiyad xisbiyo badan leh iyo abuuridda Guddiga Adeegga Garsoorka oo shaqeeya, Guddiga Xuquuqul Insaanka, iyo Maxkamadda Dastuuriga.
Haddaba Halka hoose ka akhriso War Saxaafadeedka Beesha Caalamka:
Saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka* waxay rajeynayaan in kulankii muhiimka ahaa ee ay madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) iyo Dowlad Xubnaha ka ah Federaalka (DXF) ku yeesheen magaalada Dhuusamareeb uu yahay dib u billaabashadii aadka looga dhursugayay ee wadashaqeyn wax ku ool ah oo dhexmarta madaxda DFS iyo DXF.
Dowladaha Beesha Caalamka ee soo saaray War-Saxaafadeedka ayaa waxaa ay kala yihiin, Belgium, Boqortooyada Midowday ee Ingiriiska, Canada, Denmark, Dowladda Mareykanka, Faransiiska, Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM), Ireland, Itoobiya, Jabuuti, Japan, Jarmalka, Kenya, Midowga Yurub, Masar, Netherlands, Norway, Sweden, Talyaaniga, Turkiga, Uganda, Urur-Goboleedka (IGAD), iyo Qaramada Midoobay.
Tags: Beesha Caalamka, go'aanka Dhuusamareeb, soo dhaweyn, taageerid
Madaxweynaha Jubbaland oo ka hadlay qaabka loo xalinayo xiisadda G/Gedo